Bayern Munich v Real Madrid – Kulamada Adag Ee La Ciyaari Doono Caawa Koobka International Champions Cup, Waqtiyada La Ciyaarayo Iyo Halka Aad Ka Daawan Karto. | CeelGardi News
August 3, 2016 - Written by Wararka
Waxaa dhamaad ku dhow koobka International Champions Cup qeybtiisa Mareykanka iyo Yurub iyadoo kooxda Paris Saint-Germain ay ku hogaamineysa sagaal dhibcood , waana kooxda kaliya ee ilaa iyo haatan seddex kulan ciyaartay, halka kooxaha kale ay ciyaareen min labo kulan marka laga reebo Barcelona oo hal kulan ciyaartay.
Caawa kulamo xiiso badan ayaa jira, se wakhtiga la ciyaarayo oo ah goor dambe saacada Geeska Afrika waxaa adag in si toos ah loo daawado . Kulanka ugu soo horeeya waxa uu ka dhacayaa qaarada Yurub gaar ahaan magaalada Stockholm ee caasimada dalka Sweden, waxaana iska horimaanaya kooxda heysata horyaalka La Liga ee Barcelona iyo kooxda heysata horyaalka Premier League ee Leicester City.
Barcelona ayaa kulankeedii ugu horeeyay ee tartankaan waxa ay 3-1 kaga badiyeen kooxda Celtic halka Leicester aysan weli wax guul ah gaarin labo kulan oo ay ciyaareen, barbaro iyo guuldarro ayaana soo kala gaartay. Kulankooda caawa waxa uu dhacaya 9ka fiidnimo Saacada Geeska Afrika, waxaad ka daawan kartaa haddii aad joogto Ingariiska Sky Sports 1HD, beIN Sports ayaad ka daawan kartaa haddii aad joogto Geeska Afrika iyo wadamada Carabta.
Kulanka labaad ee caawa la ciyaarayo waxa uu ka dhacayaa dalka Mareykanka waxaa New Jersey isaga horimaanaya kooxaha waa weyn ee Bayern Munich iyo Real Madrid, tababare Carlo Ancelotti ayaana caawa fursad u helaya inuu ka horyimaado kooxdiisa hore ee Los Blancos.
Bayern Munich oo labo kulan ciyaartay tartankaan ayaa 4 dhibcood leh waxaana ay ku jiraan kaalinta labaad ee kala sareysa ka dib guul iyo barbaro ay ku bilowdeen, halka Real Madrid ay kaalinta 6aad ku jiraan ka dib labo kulan ay ciyaareen, guul ay ka gaareen Chelsea iyo guuldarro ka soo gaartay PSG.
Kulanka caawa waxa uu dhacayaa 2:30am xilli danbe caawa saacada Geeska Afrika, waxaa si la mid ah baahineysa Sky Sports 1HD iyo beIN Sports.
Kulanka ugu danbeeya ee caawa la ciyaarayo ama subixii aroor hore waxa uu u dhaxeeyaa kooxaha waa weyn ee AC Milan iyo Chelsea oo ku kulmaya garoonka US Bank Stadium ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka.
Chelsea waxa ay ciyaareysaa kulankeedii ugu danbeeyay ee tartankaan waxaana ay ciyaartaan soo dhici doontaa 4am aroor hore waqtiga Geeska Afrika, waxaana baahin doonta Chelsea TV.